Hangii Kuusaa deetaa hiiki
Man'eewwan wardii keessatti filattee irratti hundaa'un hangii kuusaa deetaa hiika.
Hangii man'ee reektaangulaawaa qofa filachuu dandeessa.
Hangii kuusaa deetaa hiikuu barbaadduuf maqaa galchi, ykn maqaa duraan tarree keessa jiru fili.
Hangii man'ee filamee agarsiisi.
Tarree hangii kuusaa deetaatti hangii man'ee filamee dabala.
Title is: Hangii Kuusaa deetaa hiiki